Dayacmadoobaadkii Labaad ee sanadkan Gudihiisa oo Dunida Laga arkay, Saadaasha laga bixiyay ka xiga iyo waxyaabaha saxaafadda adduunku ka tidhi.Video | Berberanews.com
Home WARARKA Dayacmadoobaadkii Labaad ee sanadkan Gudihiisa oo Dunida Laga arkay, Saadaasha laga bixiyay...
Dayacmadoobaadkii Labaad ee sanadkan Gudihiisa oo Dunida Laga arkay, Saadaasha laga bixiyay ka xiga iyo waxyaabaha saxaafadda adduunku ka tidhi.Video
Hargeysa-(Berberanews) Dayax madoobaadkii ugu layaabka badnaa, ayaa caawa abaaro 6:15 laga arkay Geeska Afrika, Dunida Carabta iyo qaybo ka mid ah dalalka adduunka, kaasoo socday muddo saacad ku dhawaad ah.
Dayac-madoobaadkan oo noqonaya kii labaad ee dunida soo mara sanadkan gudihiisa, oo uu ka horreeyay dayacmadoobaadkii dhacay 15 June 2011, kaasoo ahaa kii ugu dheeraa uguna madoobaa ee qarni la arko wuxuu socday saacad iyo afartan daqiiqadood, halka marka barbardhig lagu sammeeyo dayac-madoobaadka caawa dhacay uu socday muddo saacad daqiiqado la’a.
Dayaxmadoobaadka oo ka mid ah Aayaadka Ilaahay, Nebigeennii suubanaa NNKHA sheegay waxa uu ina faray marka ummadda Islaamku dayacmadoobaadka arkaan ay xagga Alle u dhawaadaan, oogaana sallaado Sune ah.
Warbaahinta dalalka reer Galbeedka, ayaa hore u sii baahiyay in dayac-madoobaad midabkiisu yahay casuus, casaan xigta uu ka dhici doono dunida, kaasoo sida qallab aadame samee ah oo ay haystaan sheegay inay dhacdadan dayacmadoobaadku xidhiidh la leedahay hadhka dhulka oo dayaca qabta, taasina ay dhacdo marar nadir ah oo cad-ceed dhaca ku beegan.
Qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan dalalka adduunka sida Hindia, Maraykanka iyo meelo kale, ayaa isugu soo baxay goobo ay ku rakibanyihiin qalab lagu daawado oo soo dhawayso ah (Micriscope).
Saadaal ay sammeeyeen qaar ka mid ah Xarummaha sayniska Reer Galbeedku waxay sheegeen in dayax-madoobaad la mid ah kan caawa dhacay uu dunida soo mari doono sannadka 2012 April 15.
Previous articleSaraakiil gobolka saaxil ka bilaabay diiwaangelinta Hantida Dawladda iyo kulan ay la yeesheen Maayar Cabdalle
Next articleXildhibaano ka tirsan Golaha Guurtida iyo Wakiilada oo Berbera u tegay deminta xiisad ka dhex qaraxday Gudoomiyah Gobolka Saaxil iyo Guddidii Dan iyo Duco